စက်ရုံခရီးစဉ် - Ningbo Sunshine ရုပ်ရှင်ရော်ဘာနှင့်ပလတ်စတစ်
W က "၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ith အရည်အသွေးကောင်းတွေနဲ့ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်အတူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် " နှင့် "၏ဝန်ဆောင်မှုနိယာမ တိမ်းညွတ်အဖြစ်ဖောက်သည် '' ဝယ်လိုအားယူ " ကျနော်တို့စိတ်အားထက်သန်စွာအရည်အချင်းပြည့်မီထုတ်ကုန်များနှင့်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာဖောက်သည်များအတွက်ကောင်းသောဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမှာပါ။
" ဖောက်သည်အမှုဆောင်ခြင်း, တန်ဖိုးများ Create !" ကျနော်တို့ကိုလိုက်ရည်ရွယ်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့စိတ်ရင်းမှန်နဲ့အားလုံးဖောက်သည်ရေရှည်နှင့်သင်တို့သည်ငါတို့၏ကုမ္ပဏီအကြောင်းကိုပိုမိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုယခုကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူ ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်ရရန်ဆန္ဒရှိ us.If နှင့်အတူအကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတည်စေမည်မျှော်လင့်ပါတယ်!
T က သူသည်ထိုလယ်၌အတှေ့အကွုံအလုပ်လုပ်ကျွန်တော်တို့ကိုပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာဈေးကွက်တွင်နှစ်ဦးစလုံးဖောက်သည်များနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့ဆက်ဆံရေးအတုကူညီပေးခဲ့တယ်။ နှစ်ပေါင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကမ္ဘာပေါ်မှာထက်ပိုမို 15 နိုင်ငံများသို့တင်ပို့ခဲ့ကြပြီးကျယ်ပြန့်ဖောက်သည်များကအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
"၏အဓိက concept ကိုယူပြီး အဆိုပါတာဝန်ရှိဖြစ် " ။ ကျနော်တို့အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်ကောင်းသောဝန်ဆောင်မှုများအတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်းပေါ်တက် redound ပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်ဤလောက၌ဤထုတ်ကုန်တစ်ခု first- လူတန်းစားထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည့်နိုင်ငံတကာပြိုင်ဆိုင်မှုတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ပဏာမခြေလှမ်းမည်။
ကို C ertainly, အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းသင့်လျော်သောအထုပ်များနှင့်အချိန်မီပေးပို့ဖောက်သည် '' တောင်းဆိုချက်တွေနှုန်းအဖြစ်စိတ်ချပါလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့စိတ်ရင်းမှန်နဲ့အလွန်မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အကျိုးရှိခြင်းနှင့်အမြတ်အစွန်း၏အခြေခံပေါ်တွင်သင်နဲ့အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြားဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ရန်မျှော်လင့်ပါတယ်။ နွေးနွေးထွေးထွေးကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုက်ရိုက်သမဝါယမဖြစ်လာမှကြိုဆိုပါတယ်။
W ကအီး 10 နှစ်ကျော်တင်ပို့အတွေ့အကြုံနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ရှိသည်စကားလုံးန်းကျင်ထက်မပိုနိုင်ငံပေါင်း 30 expored ပါပြီ။ ကျနော်တို့ကအမြဲပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တွင်အရည်အသွေး, ပထမဦးဆုံးဝန်ဆောင်မှုသဘောတရားလိုင်းကိုင်ထားနှင့်ထုတ်ကုန်ရဲ့အရည်အသွေးနှင့်အတူတင်းကျပ်ဖြစ်ကြသည်။ သင့်ရဲ့သွားရောက်ခြင်းမှကြိုဆိုပါ၏!
P ကို roducts, အာရှ, အလယ်အလတ်အရှေ့ဥရောပနှင့်ဂျာမဏီစျေးကွက်တင်ပို့ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအဆက်မပြတ်စျေးကွက်ဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်တည်ငြိမ်အရည်အသွေးနှင့်ရိုးသားသောဝန်ဆောင်မှုအပေါ်ထိပ်ဆုံးတစ်ဦးဖြစ်ရန်ကြိုးစားကြဖို့ထုတ်ကုန်စွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို update လုပ်ဖို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ကုမ္ပဏီနှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ဂုဏ်အသရေရှိသည်ဆိုလျှင်။ ကျနော်တို့ကျိန်းသေတရုတ်၌သင်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုထောကျပံ့ရနျကြှနျုပျတို့၏အလွန်အကောင်းဆုံးပြုလိမ့်မည်။
" ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေး, ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှု " အစဉ်အမြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောတရားနှင့် credo ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အထုပ်, တံဆိပ်များစသည်တို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ QC ထုတ်လုပ်စဉ်နှင့်တင်ပို့မတိုင်မီတိုင်းအသေးစိတ်စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်, အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရန်တိုင်းကြိုးစားအားထုတ်မှုယူပါ။ ကျနော်တို့အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်ကောင်းသောဝန်ဆောင်မှုကိုရှာသောသူတို့နှင့်အတူကြာမြင့်စွာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြားဆက်ဆံရေးထူထောင်ရန်ဆန္ဒရှိဖြစ်ကြသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတွေ့အကြုံနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားအဆင့်သင့်လုပ်ငန်းကိုအထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်, အမေရိကတိုက်၏မြောက်အမေရိက၏တောင်ပိုင်း, အရှေ့အလယ်ပိုင်း, အာဖရိက, အရှေ့အာရှ countries.Please ယခုကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ, ဥရောပနိုင်ငံတွေကိုဖြတ်ပြီးကျယ်ပြန့်ရောင်းအားကွန်ယက်ကိုဖွင့်ထားပြီ။
H ကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေတ္တာရပ်ခံနေကြတယ်တိုင်းဖောက်သည် onest! ပထမဦးစွာအဆင့်အတန်းဝတ်ပြုအကောင်းဆုံးအရည်အသွေး, အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းနှင့်အမြန်ဆုံးဖြန့်ဝေသည့်ရက်စွဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အားသာချက်ပါ! တိုင်းဖောက်သည်အစေခံကောင်းသော Give ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောတရားပါ! ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီဖောက်သည်များနှင့်ထောက်ခံမှုများမျက်နှာသာရစေသည်! လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်ဖောက်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ပေးပို့နှင့်ရှေ့ဆက် Co-စစ်ဆင်ရေးသင်တို့၏ကောင်းသောရှာဖွေနေ! ကျေးဇူးပြုပြီးအသေးစိတ်သို့မဟုတ်ရှေးခယျြထားဒေသများတွင်အရောင်းအဘို့တောငျးဆိုခကျြအဘို့သင့်စုံစမ်းရေး။
အိုur ကုမ္ပဏီရဲ့အဓိကထုတ်ကုန်ကျယ်ပြန့်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်အသုံးပြုကြသည်; ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များ၏ 80% အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု, ဂျပန်, ဥရောပနှင့်အခြားစျေးကွက်တင်ပို့။ အားလုံးပစ္စည်းပစ္စယစိတ်ရင်းမှန်နဲ့ကြိုဆိုဧည့်သည်များကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံသို့သွားရောက်ထံသို့လာကြ၏။